DHAGAYSO:Xaguu marayaa Dastuurkii Qabyada ah ee Maamulka KMG ee Jubba?
Xaguu marayaa Dastuurkii Qabyada ah ee Maamulka KMG ee Jubba [audio mp3="http://saadaalnews.net/wp-content/uploads/2015/07/wasiirdowlaha.mp3"][/audio]
DEGDEG; AMISOM oo caawa dad ay kala baxeen guryahooda magaalada Marko ku toogtay iyo cabsi magaalada ka jirta
Wararka caawa ka imaanaya magaalada Marko ee xarunta gobalka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidanka AMISOM halkaasi ay ka geysteen xasuuq. Ciidamada AMISOM ayaa dad deggan magaalada guryaha kala baxay dabadeedna ...
TOP NEWS; Waqooyiga Gaalkacyo oo amniga la adkeeyay iyo diyaargarowga xuska Puntland
Ammaanka waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa la adkeeyay waxaana soconaya qaban-qaabada xafladaha lagu weynaynayo aas-aaska maamulka Puntland. Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya halkaasi ciidanka Puntland ayaa xaqiijiyay amniga, waxaana socda diyaargarow ...
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo booqday deegaanka Godinlabe ee gobalka Galgaduud
Madaxweyne Ku xigeenka Maamulka Gal-Mudug Ahna ku simaha Madaxweynaha Maamulkaasi Maxamed Cabdi Xaashi oo ay wehliyaan Gudoomiyaha baarlamaanka Maamulkaasi Cali Casir ayaa Maanta booqday Deegaanka Godinlabe oo kamid ah Degaanada ...
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo ka hadlay guulaha ciidanka iyo dhibaatooyinka heysta ”Sawirro”
Muqdisho, July 31, 2015….Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Gen. Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini, ayaa warbixin ku aaddan xaaladda ammaanka dalka, dagaalka lagula jiro nabad-diidka, dhismaha iyo isku-dhafka ciidamada qalabka sida, waxa uu ...
Photo News: Madaxweynaha Puntland oo si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Burtinle ee gobalka Bari
DAAWO SAWIRRO: Madaxweyne Gaas iyo Faroole oo magaalada Garoowe maanta ku kulmay+Sababta?
Madaxweynaha maamulka Puntland DR. Cabdiweli Maxamed Cali ‘’Gaas’’ ayaa maanta aqalka uu Garoowe ka deggan yahay madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ugu tegay salaan iyo tacsi. Dr. Gaas ayaa ...
Top Dhageyso: Wasiir Maareeye oo sheegay in hormar siyaasadeed ay dowladda gaartay+Jawaab kulul Puntland siiyay
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in shirka hiigsiga 2016-ka uu yahay mid ahmiyad weyn ugu fadhiya dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Wasiirka ...
Daawo Exclusive: Sawirradii ugu dambeeyay ee magaalada Baardheere ee gobalka Gedo
TOP DHAGEYSO: MR. Kaliil ”Adeer Baardheere waxaan ka dhisnay maamul dowladeed howshiisa way socotaa”
Maamulka gobalka Gedo ayaa magacaabay xubno kamid ah maamulka cusub ee degmada Baardheere ee gobalkaasi. Maamulka Wuxuu sheegay in xubno ay kamid yihiin amniga degmada dadkii qaabilsanaa inay magacaabeen si xasiloonida ...